မိတ်ဆက်ကမ်းလှမ်းချက်- Blackview BV8800 225 ယူရိုသာ | Gadget သတင်း
ကမ်းလှမ်းချက်- Blackview BV8800 ကို ၂၂၅ ယူရိုသာ
Ignatius ခန်းမ | 10/01/2022 14:00 | မိုဘိုင်း
Blackview သည် 2021 ခုနှစ်အတွက် ၎င်း၏ အလောင်းအစားအသစ်ကို 2022 ခုနှစ်အကုန်တွင် ပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အချို့သော စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိသည့် Blackview BV8800 အကြောင်းပြောနေပါသည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ထက် ငွေတန်ဖိုး ပိုပါတယ်။. ၎င်း၏ မိတ်ဆက်ပွဲကို ဂုဏ်ပြုရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤစက်ပစ္စည်းကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရရှိနိုင်ပါသည်။ AliExpress မှတဆင့် ယူရို ၂၂၅.
လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးရှာနေတယ်ဆိုရင် အားကောင်းသော ပရိုဆက်ဆာ၊ လုံလောက်သော မှတ်ဉာဏ်နှင့် သိုလှောင်မှု ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ကင်မရာအစုံနှင့် အံ့မခန်းဘက်ထရီကို ပေးဆောင်သည်၊ ဤစက်ပစ္စည်းက ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးဆောင်သည့်အရာအားလုံးကို ကြည့်ပြီး အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်အချက်ကို ကြည့်ရှုသင့်သည်။
မကြာသေးမီက မိတ်ဆက်ခဲ့သော Blackview BV8800 တွင် အများအပြားပါဝင်ပါသည်။ ဤထုတ်လုပ်သူ၏ယခင်ဗားရှင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကတိုးတက်မှုများ ၎င်းတွင် သင်မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ သင်ရှာဖွေနေသော ဖုန်းဖြစ်လာစေရန်အတွက် ၎င်းတွင် အရာအားလုံးရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ပြင်ပအပြင်ထွက်ခြင်းကို နှစ်သက်ပါက Blackview BV8800 တွင် ပါဝင်ကြောင်း သင်သိထားသင့်သည်။ MIL-STD-810H အောင်လက်မှတ်၊ Night Vision Camera နှင့်4mAh ထက်ပိုသော ဘက်ထရီ အပါအဝင် ကင်မရာ 8.000 လုံးပါ၀င်ပြီး ဆက်တိုက်အားသွင်းမည်ကို စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
1 Blackview 8800 ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
2 ကင်မရာများ လိုအပ်သည်။
3 အမြင့်ဆုံး ပျော်ရွှင်မှုအတွက် စွမ်းအား
5 Shock and drop ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
6 90 Hz မျက်နှာပြင်
7 Google Play နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Blackview 8800 ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
operating system ကို Android 3.0 ကိုအခြေခံထားသော Doke OS 11
ဖန်သားပြင် 6.58 လက်မ - IPS - 90 Hz refresh - 85% မျက်နှာပြင်အချိုး
မျက်နှာပြင် resolution 2408×1080 Full HD+ ဖြစ်ပါတယ်။
Processor ကို MediaTek Helio G96
RAM ကို 8 GB ကို
ဘက်ထရီ 8380 mAh - 33W အမြန်အားသွင်းစနစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
နောက်ကင်မရာများ 50 20 အမတ်အမတ် + + 82အမတ်အမတ်
ရှေ့ကင်မရာ 16 အမတ်
ဝိုင်ဖိုင် 802.11a/b/ g / n / ac
Bluetooth ဗားရှင်း 5.2
အညွှန်း GPS - GLONASS - Beidou - Galileo
ကွန်ယက် GSM 850/900/1800/1900
RXD ဖြင့် WCDMA B1/2/4/5/6/8/9
RXD ဖြင့် CDMA BC0/BC1/BC10
.ရာဝတီ IP68 / IP69K / MIL-STD-810H
အရောင်များ ရေတပ်အစိမ်း/Mecha Orange/Conquest Black
ရှုထောင့် 176.2 × 83.5 × 17.7mm
အလေးချိန် 365 ဂရမ်
အခြားသူများကို Dual Nano SIM - NFC - လက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာ - မျက်နှာမှတ်မိခြင်း - SOS - OTG - Google Play
12 MP မှာ စွဲမြဲနေတဲ့ အဆင့်မြင့် ထုတ်လုပ်သူ အများအပြားနဲ့ မတူဘဲ၊ Blackview သည် ကျွန်ုပ်တို့အား 50 MP ပင်မအာရုံခံကိရိယာကို ပေးဆောင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖမ်းယူမှုအားလုံးကို ကျယ်စေပြီး ၎င်းတွင်ပြသထားသည့်အရာအားလုံးကို ခံစားနိုင်စေမည့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပုံနှိပ်သည့်အခါတွင်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် တူညီသောအရွယ်အစားကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ 12 MP သာတွေ့ရသည်။ ထို့အပြင် 20 MP sensor ၊ ညဘက်မြင်ကွင်းအာရုံခံကိရိယာပါရှိပြီး မည်သည့်အလင်းရောင်အခြေအနေတွင်မဆို ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများကို ရိုက်ကူးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အာရုံခံကိရိယာနှစ်ခုလုံးနှင့်အတူ၊ အလွန်ကျယ်ပြန့်သောထောင့်အာရုံခံကိရိယာကျွန်ုပ်တို့ကို ပုံတူမုဒ်ဖြင့် ရိုက်ယူထားသော ပုံများ၏ နောက်ခံကို မှုန်ဝါးစေသော 117 MP အာရုံခံကိရိယာကို ပေးဆောင်သည့် အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကင်မရာအားလုံးက အသုံးပြုကြပါတယ်။ အတုထောက်လှမ်းရေး လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း၊ ဖမ်းယူမှုအရည်အသွေးကိုသာမက သေးငယ်သောချို့ယွင်းချက်များကိုပါ ဖယ်ရှားပစ်ရန်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
ရှေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆယ်လ်ဖီပုံများကို မြှင့်တင်ရန်၊ ဖော်ပြချက်မျဉ်းများကို လျှော့ချရန်၊ မစုံလင်မှုများနှင့် အခြားအရာများကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် အမြဲအတင်းအကြပ် ဖယ်ရှားပစ်ရန် အလှအပဆိုင်ရာ စစ်ထုတ်မှုများ ပါ၀င်သည့် 16 MP ကင်မရာ၊ ကင်မရာတို့ ပါဝင်ပါသည်။
အမြင့်ဆုံး ပျော်ရွှင်မှုအတွက် စွမ်းအား
အလိုအပ်ဆုံးဂိမ်းများကို ပျော်မွေ့ရန် သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုများကို အဆက်မပြတ်ရိုက်ကူးခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ ပရိုဆက်ဆာဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း။ MediaTek Helio G96 ကျွန်ုပ်တို့သည် စွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
AnTuTu စံနှုန်းများတွင် အမှတ် 300.000 ကျော်လွန်သည့် ဤလုပ်ဆောင်မှုနှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိသည် 8 GB RAM မမ်မိုရီအမျိုးအစား LPDDR4x နှင့် 128 GB Internal Storage အမျိုးအစား UFS 2.1.
LPDDR4X မမ်မိုရီနှင့် UFS 2.1 သိုလှောင်မှုနှစ်ခုစလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဒေတာနှင့် အပလီကေးရှင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ အမြန်နှုန်းကို ပေးဆောင်သည်။ စိတ်ညစ်စရာ နှောင့်နှေးမှုတွေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမိုကျိုးနွံသော terminals များတွင်ရှိကြသော အခြားသူများဖြစ်သည်။
La ဘက်ထရီနှင့် ကင်မရာတို့သည် မြင့်မြတ်သည်။. ၎င်းတို့၏ terminal အဟောင်းကို အသစ်တစ်ခုဖြင့် သက်တမ်းတိုးလိုသော သုံးစွဲသူတိုင်းသည် ဤကဏ္ဍနှစ်ခုကို အမြဲတမ်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အပေါ်က Camera အပိုင်းကို ပြောပြီးပါပြီ။
ကျနော်တို့ဘက်ထရီအကြောင်းပြောဆိုလျှင်, ငါတို့အကြောင်းပြောဆိုရန်ရှိသည် Blackview BV8.340 က 8800 mAh ဖြစ်ပါတယ်။. ရက် 30 အထိ အသင့်အနေအထားထားနိုင်သည့် ဤကြီးမားလှသော ဘက်ထရီဖြင့်၊ သောင်တင်နေမည်ကို မကြောက်ဘဲ စိတ်ငြိမ်သက်မှုအပြည့်ဖြင့် လေဟာပြင်သို့ ခရီးများထွက်နိုင်သည်။
Blackview BV8800 သည် 33W အမြန်အားသွင်းစနစ်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။၎င်းကို 1,5 နာရီအတွင်းသာ အားသွင်းနိုင်စေပါသည်။ ပါဝါအားနည်းသော အားသွင်းကိရိယာကို အသုံးပြုပါက အားသွင်းချိန် ပိုကြာမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင်လည်းပါဝင်သည် နောက်ပြန်အားသွင်းမှုအတွက် အထောက်အပံ့USB-C ကြိုးမှတဆင့် ဤစက်၏ဘက်ထရီဖြင့် အခြားစက်ပစ္စည်းများကို အားသွင်းနိုင်စေပါသည်။
Shock and drop ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ဤထုတ်လုပ်သူထံမှ စက်ပစ္စည်းအများစုကဲ့သို့ပင်၊ BV8800 သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကမ်းလှမ်းသည်။ စစ်ရေးလက်မှတ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို စံနှုန်းသစ်များဖြင့် မွမ်းမံထားသောကြောင့် အပြင်ဘက်သို့ ခရီးထွက်ချင်သော သုံးစွဲသူများအတွက် စံနမူနာဖြစ်စေပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညဉ့်ရူပါရုံကိုကင်မရာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဓာတ်မီးမသုံးဘဲ အလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တိရစ္ဆာန်ရှိလျှင် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးသွားသောအဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်ကို ရှာတွေ့နိုင်သည်။
90 Hz မျက်နှာပြင်
Blackview BV8800 ၏ မျက်နှာပြင်သည် 6,58 လက်မအထိ၊ FullHD+ ရုပ်ထွက်နှင့် မျက်နှာပြင်အချိုး 85% ရှိသည်။ သို့သော် ၎င်း၏ အဓိကဆွဲဆောင်မှုကို ၎င်း၏လန်းဆန်းမှုနှုန်းတွင် တွေ့ရှိရသည်။ 90 Hz သို့ရောက်ရှိသည့် refresh rate တစ်ခု။
ဤမြင့်မားသော ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်းကြောင့်၊ အကြောင်းအရာအားလုံး၊ ဂိမ်းများနှင့် browsing applications များနှင့် ဝဘ်စာမျက်နှာများ နှစ်ခုလုံး၊ ပိုအရည်ချင်းတွေ့လိမ့်မယ်။ သမားရိုးကျ 60Hz မျက်နှာပြင်များထက်၊ တစ်စက္ကန့်လျှင် ဖရိမ် 90 သည် 60 အစား တစ်စက္ကန့်တိုင်းကို ပြသနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
Google Play နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Blackview BV8800 တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းအလွှာကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည်။ Android 3.0 ကိုအခြေခံထားသော Doke OS 11 ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား တရားဝင် Google စတိုးတွင် ရရှိနိုင်သည့် မည်သည့်အက်ပ်ကိုမဆို ထည့်သွင်းနိုင်စေမည့် Play Store နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Doke OS 3.0 သည် တစ်ခုဖြစ်သည်။ Doke OS 2.0 နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကြီးမားသော သုံးသပ်ချက်. ၎င်းတွင် ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်သည့် လမ်းညွှန်ပြသမှုအမူအရာများ၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ဒီဇိုင်း၊ စမတ်အက်ပ်ကြိုတင်တင်ခြင်း၊ လက်ရေးစာနှင့် အသံမှတ်စုတိုများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် မွမ်းမံထားသော မှတ်စုပတ်များ ပါဝင်သည်။
၎င်း၏ဆားနှင့်ထိုက်တန်သည့် ကောင်းမွန်သောဂိတ်တစ်ခုအနေဖြင့် Blackview BV8800 တွင် နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်သည်။ လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ start ခလုတ်နှင့် စနစ်တစ်ခု ပါဝင်သည်။ မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု. ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင် မတူညီသော လုပ်ဆောင်ချက် ၇ ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ခလုတ်တစ်ခုလည်း ပါရှိသည်။
NFC ချစ်ပ်ပြား မပျောက်နိုင်ပါ။ ဤစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် ဤချစ်ပ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုက်ဆံအိတ်နှင့် အများသူငှာသယ်ယူသွားစရာမလိုဘဲ မည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမဆို ကျွန်ုပ်တို့၏ခရက်ဒစ်ကတ်ဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
La မြှင့်တင်ရေးစတင် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား Blackview BV8800 အတွက် ရရှိစေပါသည်။ 225 ယူရို VAT နှင့် ပို့ဆောင်ခသာ ပါဝင်ပါသည်။ပထမ 500 ယူနစ်အထိကန့်သတ်ထားသည်။ ဤ Blackview terminal အသစ်မှ သင့်အား ပေးဆောင်သည့်အရာအားလုံးကို သင်နှစ်သက်ပါက၊ နှစ်ခါမစဉ်းစားပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » ကမ်းလှမ်းချက်- Blackview BV8800 ကို ၂၂၅ ယူရိုသာ
Anker သည် CES 2022 တွင် ၎င်း၏ ထုတ်ကုန်အသစ်များကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
Dreame D9 Max၊ နောက်ဆုံးပေါ် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စက်ရုပ် ဖုန်စုပ်စက်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။